स्कुले बच्चालाई लिन आएको बस ड्राइभरले गरे घिनलाग्दो हर्कत ! – Medianp
स्कुले बच्चालाई लिन आएको बस ड्राइभरले गरे घिनलाग्दो हर्कत !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २८, २०७५१२:३०0
काठमाडौँ । स्कुुले बच्चालाई लिन आएको एक स्कुल बसको ड्राइभरले घिनलाग्दो भिडियो बनाएर इन्टभरनेटमा अपलोड गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । प्रक्राउ पर्नेमा कर्णाटक राज्यकाे एक नामी स्कुलका बस ड्राइभर रहेका छन् । ती ड्राइभरले आफैले स्कुलमा ओसार्ने गरेका बालकको आमाको भिडियो बनाएका थिए ।
सधै बालकलाई लिने जाने ड्राइभरले मौकाको फाइदा उठाएर ती महिलालाई ब्ल्याकमेल गर्न थालेको थिए । पिडित ३४ वर्षिय महिलाले ड्राइभरले ब्ल्याकमेल गर्न लागेको थाहा पाएपछि प्रहरीमा घटना दर्ता गराएकी हुन् । बालकलाई स्कुल छोड्न लिन आएका ड्राइभरले नुहाइरहेकी महिलाको भिडियो बनाएका थिए । ती ड्राइभरले १ वर्षदेख महिलालाई ब्ल्याकमेल गरिरहेका थिए ।
नशाको तालमा महिलाको घरमा पुगेका ड्राइभरले महिलको पति र घर मालिकलले गाली गरेर पठाए र फेरि यस्तो नगर्न समेत चेतावनी दिए । तर उनीहरुलाई भिडियोबाट ब्ल्याकमेल गर्छन् भन्ने जानकारी थिएन् । ती ड्राइभरले नक्कली आइडी बनाएर महिलाको आपत्तीजनक भिडियो अपलोड गरेका थिए । यस्तो भिडियो बाहिरिएपछि आरोपी ड्राइभर प्रक्राउ परेको हुन् ।